किम जङ-उन किन विदेश भ्रमणमा जान डराउँछन्? – Hotpati Media
किम जङ-उन किन विदेश भ्रमणमा जान डराउँछन्?
१ फाल्गुन २०७४, मंगलवार ०९:३९ मा प्रकाशित (3 बर्ष अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ५ मिनेट
सोल – आफ्ना क्षेप्यास्त्र परीक्षण र पारमाणविक कार्यक्रमलाई लिएर उत्तर कोरिया अचेल विश्व कूटनीतिको केन्द्रमा छ। न्यूयोर्कमा भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पनि उत्तर कोरिया एउटा मुद्दा बनेको छ। उत्तर कोरियाभन्दा त्यहाँका नेता किम जङ-अन अझ बढी चर्चामा छन्। उनी आफ्ना दिवंगत बुवा तथा पूर्व नेता किम जङ-इल र हजुरबुवा किम इल-सुङभन्दा पनि बढी ‘रहस्यमयी’ भएको बताइन्छ।
किम जङ-इलले सन् २०१० र २०११ मा चीनको भ्रमण गरेका खबरहरु अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा आएका थिए। त्यतिबेला उनको भ्रमणलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने किम जङ-इलको रणनीतिसँग जोडेर हेरिएको थियो। चीनसँग नजिकको सम्बन्ध भएपनि किम जङ-अनले हालसम्म त्यहाँको भ्रमण किन गरेका छैनन्?
सन् २००० देखि २००२ सम्म उत्तर कोरियाका लागि भारतका राजदूत रहिसकेका आरपी सिंहका अनुसार किम जङ-अन आफ्ना बुवाभन्दा फरक छन्। सिंहले भने, “किम जङ-अनले उत्तर कोरियालाई विश्वदेखि अलग राखेका छन्। विदेश भ्रमणमा उनी नजानुका कैयौँ कारण हुनसक्छन्। आफ्नो सुरक्षालाई लिएर उनमा डर हुनसक्छ। उनलाई कुनै पनि देशमाथि विश्वास छैन।” २६ वटा मुलुकसँग उत्तर कोरियाको कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको बताइन्छ।
उनी रुस गएको भए त्यो उनको पहिलो विदेश भ्रमण हुने थियो। त्यतिबेला रुसी राष्ट्रपति पुटिनका प्रवक्ताले किम जङ-अन प्योङयाङभन्दा बाहिर जान नचाहेको र त्यो उनको आन्तरिक मामिला भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
उत्तर कोरियाली नेता न विदेश भ्रमण गर्न चाहन्छन् न त विदेशी नेतासँग सम्पर्कमा आउन चाहन्छन्। अमेरिकाले उत्तर कोरियासँग सम्पर्क स्थापित गर्न कैयौँ पटक प्रयत्न गरे पनि त्यो सफल हुन नसकेको बताइन्छ।
किम जङ-अनका हजुरबुवा किम इल-सुङले एक पटक चाहिँ विमानबाट इण्डोनेसियाको भ्रमण गरेका थिए। सपरा भन्छन्, “पूरै देश सतर्क अवस्थामा हुन्छ। उत्तर कोरियाले कुनै पनि देशसँग शान्ति सम्झौता गरेको छैन। अहिले उत्तर कोरियामा देखिएको कोकोहोलो असुरक्षासँग सम्बन्धित छ